काठमाडौंको रवीभवनमा सवारी दुर्घटना, मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु, गल्ति कस्को ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडौंको रवीभवनमा सवारी दुर्घटना, मोटरसाइकल चालकको मृ’त्यु, गल्ति कस्को ?
काठमाडौं- काठमाडौंको रवीभवमा विहान सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको निधन भएको छ । कल‌ंकीबाट कालीमाटीतर्फ आइरहेकाे बा २१ च ४३४७ नम्बरको कारमा वपरित दिशाबाट गएको बा ७२ प ८१७२ नम्बरको मोटसरकाइल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालकको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी मोरङ बेलबारीका २३ वर्षीय टीकाराज गेलालको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । कालीमाटीबाट तीब्र गतिमा कलंकीतर्फ गएको मोटरसाइकल चालकले सन्तुलन गुमाउँदा विपरीत लेनमा गई कारसँग ठोक्किन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते मोटरसाइकल चालकलाई उपचारका लागि कलंकीस्थित नेशनल अस्पताल पुर्‍याए पनि उनको उपचारको क्रममा निधन भएको प्रहरीले जानकारी दियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कारको चालक स्युचाटार बस्ने कर्नेल शेखर जबरा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।